Izindawo Russian kwezomnotho: CED
Economic izifunda of Russia emelelwa izifunda 11. A indima ekhethekile udlalwa by esifundeni Central kwezomnotho, okubandakanya eMoscow, Yaroslavl, Tula, Tver, Smolensk, Ryazan, eMoscow, orel, Kostroma, Kaluga, uVladimir, Ivanovo, Bryansk esifundeni.
Ngu ndawo, imaphakathi kwezomnotho of Russia lifaka 6th (ayizinkulungwane 483,1 sq Km.) Sabantu (bangaphezu kwezigidi ezingu-30) - umholi phakathi kwezinye izifunda.
Ukuthuthukiswa kwendawo kunomthelela evumayo isikhundla womhlaba. Itholakala engxenyeni ephakathi ye engxenyeni European yezwe, okuyinto ebaluleke kakhulu imizila yezokuthutha, ekugqugquzeleni intuthuko yohwebo nezinye imikhakha yezomnotho. CED kuyinto core kwezomnotho kanye zomlando isimo.
Le ndawo emaphakathi iyona elinabantu abaningi kakhulu ingxenye yezwe. Omunye nanhlanu labantu liragela phambili angaphansi kwamaphesenti amathathu kulo lonke leli zwe. I kwabantu silinganiselwa kubantu 60 per km sikwele. Ngokuya Ukwakheka ubuswa kwemiphakathi yasemadolobheni, kodwa abantu abangaphezu kuka-14 kwesigidi bahlala e agglomerate eMoscow. Esifundeni imizi engaphezu kuka-250, yiziphi izisebenzi kanzulu oqeqeshiwe.
Njengezinye nezifunda zezomnotho Russia, esifundeni has a umkhakha ezivamile. Le ndawo ipulazi kuyinto eziyinkimbinkimbi eziyinkimbinkimbi okuhlukahlukene, lapho indima evelele embonini onguchwepheshe ukukhiqizwa nematerialoemkoy imikhiqizo eyinkimbinkimbi, okudinga ucwaningo lwesayensi futhi abasebenzi abanamakhono.
Mechanical ethulwa ezokuthutha kanye namandla ubunjiniyela, umshini amathuluzi, Instrumentation, kanye ukukhululwa lwamakhompyutha electronic. Into ebaluleke kakhulu izikhungo umshini-wokwakha eMoscow nesifunda lapho izimoto etholakalayo namaloli, umfula izikebhe, amabhasi, electronics kanye nezokuxhumana, Tver - ubunjiniyela yezimoto futhi mechanical, uVladimir futhi Tula - ukukhiqizwa kwe imishini yezolimo kanye nogandaganda.
Kakhulu athuthukile chemical umkhakha. esifundeni Central okulethwa nezinye izifunda kwezomnotho eRussia phosphate futhi nitrogen umquba, soda, chemical endwangwini, sulfuric acid kanye zokwenziwa kuyo izihlahla zenjoloba.
izimboni Old ubhekene nenhlekelele ezijulile, kuyinto basembonini yendwangu. izitshalo Ukotini asezindaweni Kostroma, Ivanovo, Yaroslavl, Tver, eMoscow. Ngaphezu kwalokho, kule ndawo kukhona izinkampani ukuthi zikhiqiza ubulembu, noboya izindwangu.
Amandla igxile izinto zokusetshenziswa letiphakela nezinye izifunda kwezomnotho eRussia. Mayelana supply uwoyela negesi ukuthuthukiswa zokubasa wendawo kwehle ngokuphawulekayo. Elikhulu Ukushisa wesifunda izitshalo akhiqiza ingxenye 5 ugesi wezwe. Ngaphezu ezishisayo kanye Hydro izitshalo akhona amandla esifundeni usebenze izitshalo ngamandla enuzi ise Tver futhi Smolensk izifunda kanye emzini Obninsk. Nokho, naphezu ukuthuthukiswa kwamandla kagesi, umkhakha wesifunda sintula amandla, ngokwengxenye ngokunika ke kusukela iVolga esifundeni.
Ezolimo esifundeni umkhiqizi elikhulu ubisi, inyama, imifino kanye namazambane. Umbuso wasenyakatho ingxenye endaweni ngokukhethekile yefilakisi ezikhulayo, rye ebusika, intwasahlobo kakolweni avalele izinkomo zizalela. Izizinda zesifunda ekuthuthukeni kwezolimo suburban, kancane nezidingo zendawo ukudla. Ingxenye ulahlekile komkhiqizo wezolimo livela kwezinye izindawo zaleli zwe futhi amazwe.
Uhlelo zokuhamba kahle, ke uxhuma imaphakathi kanye nezinye izifunda kwezomnotho eRussia.
Inqubomgomo ezezindlu laseMoscow
Izimpikiswano eyinhloko emnothweni
Kungakanani izindleko amafutha 2008? Dynamics of amanani, izinhlobo amanani, ukwakheka izindleko
Isigaba Economic nemithetho kwezomnotho, izimiso zomnotho. Ingqikithi izigaba zezomnotho nemithetho
I-julienne recipe ngamakhowe, inkukhu, izilwane zasolwandle.
Ihholo design efulethini elincane: ukwakha isikhala ukhululekile
Umholo uhlelo lobulungu.
Funda obumbene. Zitholakala kanjani iluphu phezu izinaliti ukunitha?
Ubude neMpi - a ... izibonelo zomlando kanye ukuphuthuma inkinga namuhla
Umcabango ukumelwa, izinhlobo ukumelwa, ukubaluleka
Mineral powder ukwenziwa asphalt amamiksi
Indlela ukubhala mqondo
Izimfanelo zobuchwepheshe - isihluthulelo sokuphathwa okuphumelelayo